Posted by သက်ဝေ at 5:21 PM
တန်ခူး July 15, 2008 at 10:31 PM
သက်ဝေရယ်… ကြေကွဲစရာ တံခါးဖွင့်ချိန်လေးက ရင်ကိုထိရှလိုက်တာ…
သူ့ အတွက်ကြွေကျလာတဲ့ ပုလဲလေးတွေက ခုတော့ တကယ့်တကွဲစီပါလား သက်ဝေရယ်…
myatnoe July 16, 2008 at 4:49 AM
ဟုတ်တယ်..မြတ်နိုးလည်းအဲလို အဆုံးသတ် ၀တ္တုရေးထားတယ်..နောက်ဆုံးကျတော့ မာနရဲ့အဆုံးသတ်ဟာ လူကို ထိတယ်နော် အမ..။
အမရယ် နောင်တဆိုတာမျိုးလဲ အချိန်လွန်မှ ရတာ ဆိုတော့...
သူမရဲ့ တံခါးဖွင့်ချိန်က နောက်ကျခဲ့ပီနော်..။
စကားမစပ် အမက တံခါးနဲ့ပက်သက်တဲ့ အကြောင်းအရာ တော်တော်များမျးရှိပုံပဲနော်..။ဟီး
sonata-cantata July 16, 2008 at 11:46 PM
အချစ်ဆိုတာ အတ္တလို့ ဆိုရင် အဲ့ဒီ အတ္တက ကိုယ့်ကိုကိုယ်တောင် မသိတော့တဲ့ အတ္တပါပဲ...
Yu Wa Yi July 18, 2008 at 7:23 AM
စောစောစီးစီး တံခါးခေါက်သံဖြစ်ပါ၏။အိမ်ရှင်မနိုးသေးဟုယူဆကာ လှည့်ပြန်သွားပါသည်။
နောက်တာပါ သက်ဝေရေ, ရေးထားတာလေးက ခံစားရတယ်။
ရွှန်းမီ July 18, 2008 at 9:50 AM
ကြောင်လေး ရယ် နှင်းဆီပင်ရယ် .. မိုးရွာတုန်း ဖွင့်လိုက်တဲ့ တံခါး ရယ်.. သူမရှိတော့တာရယ် . . .
တခါတလေတော့လည်း နှစ်ယောက်လုံးက မာနကြီးနေရင် ကိုယ်က စ လျှော့ဖို့ ခက်တယ် .. ။
တံခါး ပြန်ဖွင့်တဲ့အချိန် သူ့ ကို မတွေ့လို့ ကြေကွဲတယ် ဆိုလည်း သူသိတာမှ မဟုတ်တော့တာ . .။
nu-san July 19, 2008 at 2:13 PM
သက်ဝေရဲ့ တံခါး series တွေက အရမ်းခံစားရတယ်။ အဲဒါကြောင့် တစ်ချို့တွေက ပြောကြတာ သိပ်မမူနဲ့တဲ့။ မိန်းကလေးဘ၀က ရွေးချယ်ခွင့်အရမ်းနည်းပါးတယ် မဟုတ်လား။ သက်ဝေရေ.. Happy Ending လေးတွေလည်း ဖတ်ချင်ပါတယ်နော်... :)
mothonlay July 20, 2008 at 8:11 PM
မချစ်တာ၊ မချစ်နိုင်တာ အဲတာတွေကအပြစ်မှ
အချစ်ဆိုတာမျိုးက ငါပေးတယ် နင်လည်းငါ့ပြန်ပေးလို့
ပြန်မချစ်နိုင်လို့ မချစ်ခဲ့လေတဲ့ အချစ်ခံရသူရော
အချစ်ဟာ လိုချင်တက်မက်မှု၊ ဖြည့်ဆည်းလိုက်မှုတွေထက် ပိုသော
ဇာတ်လမ်းထဲက မိန်းကလေးအနေနဲ့လည်း အပြစ်တင်နေစရာမလိုသလို
လှတဲ့ချစ်ခြင်းကို ပိုလှသွားအောင် အရောင်တင်ပေးလိုက်တာကိုက
mothonlay July 20, 2008 at 8:15 PM
Kay July 24, 2008 at 4:27 PM
ကိုစောငြိမ်းရဲ့ သီချင်းလေး တပုဒ်ကိုသတိ ရ သွားတယ်။
- မမြဲသော ရုပ်နာမ် ပြောင်းလဲသည့် နှယ်..ဖြစ်ပြန်..ပျက်ပြန်..အချစ်မှန်တရားရယ်..မူလွန်းတဲ့သူရယ်...ပွင့်ဦးကြွေ မှဖြင့်ကွယ်..မပန်ဆင် စေချင် ရက်တော့တယ်...--
layma July 27, 2008 at 1:07 AM
ခံစားမှု တံခါးလေးကို နှစ်သက်မိပါတယ်..။
တံခါးလေး ဖွင့်လိုက်တယ်ဆိုတော့ လှစ်ခနဲ ၀မ်းသာသွားတာ... သူရှိမနေတော့ဘူးဆိုတော့ အပျော်တွေ စုံးစုံးမြုပ်ပေါ့..။
သက်ဝေ August 4, 2008 at 1:02 PM
ပုလဲသီ တစ်ကွဲစီ လေးကို မမေ့သေးဘူးပေါ့နော်...။ ကျေးဇူး... အထူး... အထူး...။
နောင်မှတကြရလို့နောင်တ လို့ ခေါ်ကြတာလေ..။
စကားမစပ်.. သက်ဝေဆီမှာ တံခါးနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ အကြောင်းအရာတွေ ရေးစရာရှိနေသေးတယ်..။ ရေးပြီးရင် လာအားပေးအုံးနော်..။
အဲဒီ အတ္တတွေပေါ့နော်... သိပ်ကြောက်စရာကောင်းအောင် ပူလောင်စေတာလေ..။
ဟင်း.. မီးမီးက အိပ်ပုတ်... စောစောစီးစီး မနိုးတတ်ဘူးဗျ...။ အားပေးတာ ကျေးဇူးနော်..။
စဉ်းစားစရာပါဘဲနော်...။ တံခါး ပြန်ဖွင့်တဲ့အချိန် သူ့ ကို မတွေ့လို့ ကြေကွဲတယ် ဆိုလည်း သူသိတာမှ မဟုတ်တော့တာ.. ဆိုတာလေးကို..။
အမြဲတမ်း အားပေးတာ ကျေးဇူးနော်..။
Happy Ending လေးတွေလဲ ရေးပါအုံးမယ်...။
တစ်ပုဒ်အနေနဲ့ ပြန်ရေးကြည့်ပါအုံးမယ်။ အကြံပေးတာရယ်၊ ကဗျာလေး အတွက်ရယ်.. ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်။
မကေ က တော်လိုက်တာ..။
သီချင်းတွေ အများကြီး အလွတ်ရ မှတ်မိနေသေးတယ်နော်...။ ဟုတ်တယ်.. ကေပြောမှ အဲဒီသီချင်းလေးကို ပြန်စဉ်းစားရင်း ဆိုကြည့်နေမိတယ်...။
နှစ်သက်တယ်ဆိုလို့ဝမ်းသာတယ် နော်...။
သူငယ်ချင်းများအားလုံး ရွှင်လန်း ချမ်းမြေ့ကြပါစေ...။
မိုးငွေ့........ March 18, 2013 at 5:27 PM
ဖတ်ပြီးသားပဲ ဒါပေမယ့် ပြန်ဖတ်လည်း အသစ်အသစ်ဖြစ်နေတုန်း ခံစားမှုတွေကို ပြင်းပြင်းထန်ထန်ပေးနိုင်တုန်း ဖတ်ပြီး ၀မ်းနည်းကြေကွဲနေရတုန်း